Toeram-pamokarana vahaolana amin'ny nify | Mpanamboatra sy mpamatsy vahaolana amin'ny nify China
■ Ny famolavolana cushion mirindra dia mifanaraka amin'ny fipetrahana ergonomika sy fihetsika mandainga, izay mety kokoa amin'ny fitsaboana maharitra.
■ Ny cushion amin'ny seza dia noforonina amin'ny fomba misaraka, ary ny fitsaharan'ny tongotra dia noforonina tamin'ny alàlan'ny Pu fo mafy, izay mahazaka akanjo ary tsy mora simba. Ny toerana ambany ambany indrindra dia 380mm, izay mety amin'ny marary miakatra sy midina.
■ Kodiarana vita amin'ny hoditra malefaka avo lenta miaraka amin'ny fanohanan'ny lumbar sy ny famolavolana loha hitazona mafy ny fahatsapana fonosana.
■ Ny famolavolana seza miendrika paiso dia mampitombo ny habaky ny tongotry ny dokotera ary manome antoka ny fidirana akaiky tsy misy farany eo amin'ny mpitsabo sy ny marary.
Ny singa ampiasana nify dia fitaovana fitsaboana nify natao manokana ho an'ny fandidiana implant nify. Izy io dia afaka mamaly ny fepetra takiana manokana amin'ny jiro fandidiana nify, ny suction sns.
Ny Unit-nify Grace-D XH502 dia novolavolaina mifototra amin'ny lohahevitra "Ankafizo ny fitsaboana" avy amin'i SHINVA. Ny fifehezana mandeha ho azy microcomputer sy ny fampisehoana LCD dinika tena izy dia mahatonga ny asan'ny dokotera ho mora sy manan-tsaina kokoa. Ny endrika ergonomika dia mahatonga ny marary hiala sasatra ary mampihena ny fihenjanana sy ny fanaintainana amin'ny fitsaboana. Ny fahombiazany feno tsara dia manampy ny marary hankafy ny fitsaboana.
Ny Unit-nify Grace-D XH501 dia novolavolaina mifototra amin'ny lohahevitry ny "fitsaboana mahazo aina" avy amin'i SHINVA. Ny endrika dia mihevitra ny maha-aina sy mora ny fitsidihan'ny marary sy ny asan'ny dokotera. Ny fisafidianana ara-pitaovana tena tsara, ny endrika ergonomika, ny fifehezana mandeha ho azy ny microcomputer ary ny fizotran'ny famokarana bobongolo dia mahatonga azy io hahomby azo antoka, fampandehanana mety ary fisehoana tsara tarehy.
Smart otrikaina fanasan-damba
Ny Smart Series washer-disinfector dia ampiasaina amin'ny fanasana, famonoana otrikaina ary fanamainana ny fitaovana (ao anatin'izany ny sombin-tànan'ny nify), kojakoja fitaratra ary kojakoja plastika ao amin'ny hopitaly CSSD na efitrano fandidiana.
Ny vokatra fanasan-damba sy famonoana otrikaretina dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena EN ISO 15883.
AKAIKY BITSERA-TSOTRA B
Sterilizer mahamay indrindra: T18 / 24/45/80 dia sterilizer takelaka Class B. Amin'ny maha-karazana sterilizer tosika avo azy azy, dia mitaky setroka ho mpanelanelana amin'ny sterilisation izay azo antoka haingana sy ara-toekarena izy ireo. Ampiasaina matetika ao amin'ny departemantan'ny nify, departemanta ophthalmological, efitrano fandidiana ary CSSD hanaovana ny fanafoanana ireo fitaovana, lamba, fitaovana, miolakolaka na tsy mivaky , mpanelanelana amin'ny kolotsaina, ranon-javatra tsy voaisy tombo-kase sns.
Sterilizer mahamay indrindra
Sterilizer be indrindra: T60 / 80 ho toy ny sterilizer faneriterena avo lenta, mitaky setroka ho mpanelanelana fanamorana azy izay azo antoka haingana sy asa ara-toekarena. Ny rafitra pumping indroa mahomby sy ny evaporator fitehirizana angovo mahery vaika dia haingana kokoa noho ny sterilizer andiany mahazatra MOST-T ho an'ny hafainganam-pandehan'ny pumping sy ny famokarana etona. Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny departemantan'nystatolojika, departemanta ophthalmological, efitrano fandidiana ary CSSD hanaovana ny fanamorana ny lamba fitaovam-piadiana na tsy mivaky, fitaovana, haitao ara-kolontsaina, ranon-javatra tsy nasiana tombo sns
Digital Cassette Sterilizer dia fitaovana sterilization haingana be mandeha ho azy izay mampiasa etona faneriterena ho mpanelanelana. Mety amin'ny fanamorana ny fitaovam-pitsaboana izay mahazaka ny tsindry etona, toy ny sanganasa nify, fitaovana enti-miasa ophthalmic, endoscope henjana nify ary fitaovana fandidiana sns.